साऊन ४ देखि १० गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/साऊन ४ देखि १० गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
साऊन ४ देखि १० गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
२०७७ श्रावण ४ गते देखी श्रावण १० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) साताको प्रारम्भमापुराना मित्रजनहरुको सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र दरीलो बनाउन मद्दत पूग्नेछ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । बल तथा पराक्रमका क्षेत्रमा बृद्धिहुनेछ । मनोरञ्जनमुलक यात्राको योग रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्य सम्पादनमा अधिक समय ब्यतति रहनेछ साथै कार्य सम्पादनको श्रेय समेत अन्य ब्यतिहरुले प्राप्त गर्नेछन । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोग तथा खरिदको योग रहेकोछ । मानप्रतिष्ठामा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले कार्यक्षेत्रमा साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । साताको अन्त्यतिर नयाँकार्यको थालनि गर्न समयले साथ दिनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा उत्तम समय रहनेछ । यो साता आर्थीक क्षेत्र सबल तूुल्याउन शारिरीक आलस्यता त्याग्नु पर्नेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) साताको प्रारम्भमा बाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । संचित रकम खर्चगर्नु पर्ने समय रहेकोछ । सभा समारोहमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्ने सम्भाबना रहेकोले खानपाानमा ध्यान पूर्याउनु होला । बल तथा प्रराक्रममा बृद्धिहुनेछ । गरीरहेको कार्य परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । प्रतिश्पर्दाजन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । सामान्य यात्राको योग बन्नेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उन्पन्नहुन सक्नेछ । साजेदारि कार्यमा साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । महत्वपूर्ण कार्यको जिम्बेवारि प्राप्त रहनेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने उत्तम समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेकोछ ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) साताको प्रारम्भमा ब्यापार ब्यवसायको निम्ति तथा नयाँ लगानिका लागी राम्रो समय रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगमा अधिक समय ब्यतित रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले समय निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । खानपानका कारण स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । साताको अन्त्यतिर पुराना तथा प्रिय मित्रजनको भेटघाटले मन हर्शित रहनेछ । तपाईको क्षमताको उचित मुल्याङ्कन हुने समय रहेकोछ । प्रतिपक्क्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यर्होनु पर्ला ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मानसम्मानमा आचँआउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । परीवारका सदस्यहरुबाट टाढाभएको महसुस रहनेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिषेश सजग रहनु पर्नेछ साथै साजेदारी कार्यका क्षेत्रमा साबधान रहनु उत्तम रहनेछ । पारीवाकि साथसहयोगमा बृद्धिहुनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा जिबन साथीको साथसहयोग उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताले गरीरहेको कार्यमा ढिलाईको योग बन्नेछ । अध्यन अध्यापनमा लगाईएको समय महत्वपूर्ण रहनेछ । शिप तथा क्षमताका आधारमा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । साताको अन्त्यतिर प्रियजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि आउनाले मानसीक समस्या आईपर्न सक्नेछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा बृद्यिहुने योग रहेकोछ । बादबीवादको झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) पुराना तथा प्रिय मित्रजनको भेटघाटले मन हर्शित रहनेछ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । तपाईको क्षमताको उचित मुल्याङ्कन हुने समय रहेकोछ । प्रतिपक्क्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । बुधबार पश्चात सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानका कारण स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । साताको अन्त्यतर्फ ब्यापार ब्यवसायको निम्ति तथा नयाँ लगानिका लागी राम्रो समय रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगमा अधिक समय ब्यतित रहनेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) सफल कार्यसम्पादनको लागी कडा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको तत्परताको बिशेष कदर हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा मधुरता छाउनेछ । खोज तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा बौदिकताका् खर्च हुनेछ । बाकपटुताको कारण कुरा काट्नेहरु चुप भइ प्रशंसा गर्न थाल्नेछन । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ । बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा नयाँकार्य थालनिका अवसरहरु प्राप्त रहनेछन । साताको अन्त्य तिरटाढाको मित्रसँग अप्रत्यासित मिलन हुनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । बोल्दा बिचार पुर्याउनु होला । स्वास्थका कारण कार्यक्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु बाटँ टाढा भएको अनुभव हुनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) धार्र्मीक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अप्रत्याशीत खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोले सजग भइ यात्रा गर्नुहोला । साथीसँग सामिप्यता बढे पनि लाभ भने ग्रहण गर्न सकिनेछैन । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको तत्परताको बिशेष कदर हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । सामान्य अप्रिय खबरले मनमा चिन्ता उत्पन्न हुन सक्नेछ । साताको अन्त्य तिर पुराना लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । नयाँकार्यको थालनि आम्दानिका उत्तम श्रोतबन्नेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । यो साता कार्य क्षेत्रबाट आफ्नो नाम चलाउन उत्तम समय रहेकोछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) कार्यमा बिश्लेषणको अभावले पारिवारिक सम्बन्धमा बैमनश्यता उत्पन्न हुनेछ । मित्रजन तथा बिश्वासिलो व्यक्तीद्वारा धोका हुनसक्छ सचेत रहनुहोला । कार्य सम्पादनमा गोपनियताको आवश्यकता रहनेछ । मित्रजनहरु सँगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । मगंलबार पश्चात यात्राकारक समय रहनेछ । साथी भाईहरुको अधिक निकटाका कारण सामान्य तनाबमा फसीएला । मुद्दामामिलाको झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष साबधानी अपनाउनु होला । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन बाट आम्दानीको बाटो फेला पर्नेछ । साताको अन्त्य तिर सभासम्मेलनमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । भुमि तथा बाहान शुख प्राप्त रहनेछ । यो साता अरुको बिश्वासमा नर्पनुनै उत्तम रहनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) साताको प्रारम्भमा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । शारिरीक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाईको योग रहेकोछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाबको सामना गर्नु पर्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । अरुको बिश्वासमा छोडिएका कार्यहरुमा पुर्नराबलोकन गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोछ । भोज भतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । गरीरहेको कार्य स्थल परीर्वतनको सम्भाबना रहनेछ ।साताको अन्त्य तिर दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोले सजग भइ यात्रा गर्नुहोला । साथीसँग सामिप्यता बढे पनि लाभ भने ग्रहण गर्न सकिनेछैन । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको तत्परताको बिशेष कदर हुन सक्नेछ । यो साता स्वास्थका कारण कार्यक्षेत्र प्रभाबित रहनेछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) साताको प्रारम्भ तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशमा कमि आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । प्रतिश्पर्दाजन्य कार्यमा तपाईको अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथसहयोगमा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट आई पर्ला । तपाईको कार्यले अन्य ब्यक्ति हरुलाई मनग्य लाभ दिलाउने छ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । नजिकका ब्यत्तिहरुबाट धोकाहुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । साताको अन्त्यमा स्वास्थमा उत्पन्न समस्याका कारण सामान्य तनाब सहनु पर्नेछ । यो साता कार्य सम्पादनमा गोप्यताको आवस्यकता रहनेछ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) अध्यन अध्यापनमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको अनुशरणले सामान्य झन्झटका बिचमापनि कार्य सम्पादित रहनेछन । पुराना लगानि उठाउन समयले बिषेश साथ दिनेछ । प्रतिश्पर्दाजन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । देश बिदेशको यात्राको योग बन्नेछ । पछीको फाईदाका निम्ती सामान्य लगानि बढाउनु पर्ने योग रहेकोछ । साताको अन्त्यमा ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा उत्तम समय रहेकोछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । मानसम्मानमा बृद्धिहुन समय रहेकोछ ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला । पारीवारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यमा समेत समस्या उत्पन्नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । मान्यजनहरुको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । सभासम्मेलनका क्षेत्रमा सरीक रहने अवसर प्राप्त रहनेछ । आफुभन्दा सानाहरु सगँ मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय खर्चीदा उत्तम रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय राम्रो रहेकोछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनाले मन हर्षित रहनेछ । साताको अन्त्य तिर तपाईको कार्यमा त्रुटिदेखाउने हरुको बृद्धिहुनाले कार्य क्षेत्रमा साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढाँ भएको महसुस रहनेछ । यो साता कला कौशलको प्रयोगमा आम्दानि सबल तुल्याउने समय रहेकोछ ।
२०७७ सालका यी ५ भाग्यमानी राशिहरू !! तपाइको पनि हेर्नुहोस !
जोडी मिलाउने दुप्चे`श्व`र भगवानलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशि`फल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ।
बिहानै श्री पशुपति नाथ को दर्शन गरी भेटी स्वरूप 1 शेयर गर्दै पढ्नुहोस् !आजको राशिफल,२०७७ वैशाख १८गते,
आज २०७६ चैत २४ गते सोमबारको राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार १ गते सोमबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल